हिमालय खबर | मनिषको सद्बुद्धि पलाएको त्यो दिन ....
प्रकाशित २८ श्रावण २०७५, सोमबार | 2018-08-13 12:25:50
आफूले आफूलाई जिते संसार जित्न सकिन्छ । त्यसो त आफू भित्रको दुर्गुणलाई जित्न त्यति सजिलो पनि छैन । दृढ अठोट हुने हो भने गार्हो पनि छैन । हो त्यस्ता विजयताहरु तपाईं हाम्रो वरीपरी नै छन् ।
तपाईँको परिचय ? - मैले सोधें
सबैलाई स्वागत गर्दै बोलिरहेको देखेपछि लागेको थियो पक्कै रेष्टुरांको मालिक यिनै हुनुपर्छ ।
- हजुर म मनिष ढकाल ।
अन्दाजि ४०/ ४५ वर्षको भद्र मानिसले विनम्रताका साथ जवाफ दिए ।
उनको अर्को नाम म्यानि ढकाल पनि हो । गोरखा दबारको विजनेश कार्डमा सीईओ म्यानि ढकाल लेखिएको छ ।
त्यहाँ आएका प्रत्येक नेपाली पाहुनाहरू अर्थात पत्रकारहरुलाई शिष्टाचारका साथ अभिवादन र साथसाथै छोटो छरितो कुराकानी पनि गर्दै थिए उनी ।
बिहानको नास्ता खान जाँदै गर्दा गाडिमा नेजा अधिवेशन संयोजक ध्रुव कुँवरले गोरखा दरबार रेष्टुराँकाबारे थोरै जानकारी गराई सकेका थिए । नेजाका पूर्व कोषाध्यक्ष शैलेस पोखरेलको साथी भन्ने पनि हामीले पत्तो पाइसकेका थियौं । को होलान त यी नेपाली मालिक भन्ने सामान्य मेरो उत्सुकता अब पुरा भैसकेको थियो ।
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) को छैठौँ अधिवेशनको सिलसिलामा हामी वासिङ्टन, सियाटल स्थित गोरखा दरबारमा बिहानको नास्ता खान पुगेका थियौं ।
नास्ताको पर्खाइमा छेवैको कुर्सिमा थियौं हामी । सहभागी मध्ये कसैले जानकारी गराउनु भयो - नास्ता पछि थप समय पनि लिदा हुनेरे, चुनावी छलफल यहीं गर्ने रे ।
पछि उनकै मुखबाट सुनें - "मैले अघि नै अरु बाहिरी ग्राहककोलागि ढोका बन्द गरिसकेको छु । तपाईँहरु अरु थप समय आरामले लिनुहोस । " नेपालीप्रतिको यो सद्भाव देखेर स्वाभाविक रूपले मेरो ध्यान एकाएक उनिप्रति आकृष्ट भयो । यसो भित्तातिर नजर डुलाएँ - डोको, खुकुरी, नाङ्गलो, चुलेसि, हँसिया, मादल, सारंगी लगायतका अनेक बाजाहरु आकर्षक रूपले झुण्डयाइएको थियो । नेपाली मौलिकतालाई जीवन्त राख्दै पूरै कलाकृतिले सजिएको थियो गोरखा दरबार । राम्रो लाग्यो, मैले ती सुन्दर नेपालीपनको सटासट फोटो पनि खिंचे ।
अर्को कुरा, नास्ताकोलागि राखिएको जलेवी पुरीसँग चनाको तरकारीको स्वाद तारीफ योग्य थियो । मैले थपि थपि खाएँ । परदेशमा पाएको यो स्वदेशी स्वादले मेरो मन मस्तिष्क निकै रमायो । यसले पनि गोरखा दरबार र यसका सृजनकर्ताप्रति थप कौतूहलता जगायो ।
रेष्टुरांको एउटा कुनाबाटै म हेरिरहेकी थिएँ । त्यहाँ आएका करीब चालीस , पचास पाहुनासँग प्राय मनिषले बोल्न भ्याई सकेका थिए ।
यी भद्र मानिसलाई एउटा कुनोबाट नियाली राख्दा मैले मनमनै सोचें - आज जीवनको यो मोडमा आईपुग्न उनले गरेका संघर्षका कथा, व्यथा होलान, विर्सिनसक्नुका त्यस्ता घटनाहरु पनि त होलान नी ! हामीसँग समय थियो किनकी अर्को लटमा नास्ता गर्ने साथीहरु अझै आउँदै हुनुहुन्थ्यो । मैले यो मौका नगुमाउने विचार गरें ।
छिटो, छिटो खाइसकेर वीस मिनेटको समय मागे मनिष ढकालसँग । उनले खुशिसाथ स्वीकार गरे ।
केहि पत्रकार साथीहरु नेजाको चुनावी मेलोमेसोमा लाग्दै गर्दा हामी चाँही रेष्टुराँ भित्रै कुनाको एउटा टेबल तर्फ लाग्यौं मनिषको जिन्दगीका पानाहरूलाई पल्टाएर हेर्न ।
सदबुद्धि पलाएको दिन
गोरखाबाट मनिष ढकालका पुर्खाले विराटनगर बसाईं सरेका रहेछन । बिराटनगरको सेरोफेरोमा एउटै मात्र छोरो मनिष ढकाल बडो लाड प्यारमा हुर्किए ।
"अमृत कुनै वखत विष पनि हुन सक्छ "भने जस्तै यो लाडप्यारले उनि माथि उल्टो असर गर्यो । छ, सात कक्षा पुगेपनि पढाईमा भने मठ्ठू ! बिराटनगरको जनता माविमा पढ्थे उनि ।
बाबुको सोर्स फोर्सले कक्षा चढे पनि यिनी कखगघ, एवीसीडी बाहेक अरु केहि पनि नजान्ने रहेछन् । स्कुल त गई टोपल्ने तर आवारागर्दी मै यिनको दिन बित्दो रहेछ । खराब संगतको लतमा लाग्दा पढाई कुन चराको नाम हो भन्ने भएको थियो । दश कक्षासम्म कसरी पुगे यिनी सम्झेर आफै आश्चर्य मान्छन् । अब त सोर्स फोर्स पनि चलेनछ, तीन बलड्यांग खाएछन् दश कक्षामै । यिनलाई पास र फेलको फरक सायद थाहा थिएन । फेलले कुनै असर पनि गरेको थिएन होला । रिजल्ट आएको दिन हुनुपर्छ, दिउसै घरमा मस्त सुतिरहेका मनिषको कानमा गुनगुन आवाजहरु एकाएक ठोक्किन पुगे । बाहिर चार पाँचजना मान्छेहरु जो उनकै बारेमा कुरा गर्दै थिए । मनिषका बुबा निकै निराश हुँदै भन्दै हुनुहुन्थ्यो - "हामीले छोरा सुध्रला भनेर अब माया मार्यौ । लौ केहि गर्दा नहुने भो। " आफ्नो एक मात्र छोरालाई इंजीनियर बनाउने बुबाको धोकोमा पानी फेरिएको थियो । बाहिरबाट आएका लामा लामा निराशाका सुस्केराहरुले उनको कान सुइरोले घोचे जस्तै भयो ।
"छोराले गर्दा तपाईंले सारै दुख पाउनु भयो ढकाल दाई।" - अनेक प्रकारले बुबालाई सहानुभूति दिदै थिए मानिसहरू । यो सब भित्रबाट सुनिरहेका मनिषलाई सारै नराम्रो लागेछ । त्यो निराश र लाचार वातारणले मनिष अत्यन्त दुखी भएछन् । एकाएक मनिष भित्र सदबुद्धि पलायो - "धत मैले सबलाई दुख दिएर अहिलेसम्म कस्तो नकाम गरेको रहेछु ।"
त्यो घटना वा त्यो परिस्थितिले उनको भित्री मनको ढोका उघारीदियो ।
"उत्तिनै खेरी मेरो मन र सोच बदलियो ।" - मनिषले यसो भनिरहदा उसको भावभंगीलाई मैले गहिरिएर निहालें ।
उनी भन्दै गए म लेख्न छोडेर एकछिन एकतमासले उसलाई नै हेरिरहें ....।
"अति फिल भयो मलाई । खाटबाट उठें र आफैसँग अठोट गरें - अब म कुनैपनि हालतमा पढ़छु ।"
त्यसपछि विराटनगरको आदर्श माविमा नौ कक्षामा गएर भर्ना भए । वडो गम्भीरताका साथ पढ्न थाले । अन्ततः उनले एसएलसिमा स्कुल टप गरिछाडे । बाटो के पहिल्याए, विसंगतिले उनको साथ चटक्कै छोडिदियो । त्यसपछि उनले कहिल्यै पछाडि फर्कनु परेन । पछि उनले भारत गएर इंजीनियरिंग अध्ययन गरे ।
बुबाको सपना उनले पुरा गरे । आज अमेरिकामा मनिष राम्रो इंजीनियरका रुपमा चिनिन्छन् । साथसाथै आफ्नो व्यापार व्यवसाय समेत पनि गर्न भ्याएका छन् उनले । भारतको अध्यन पछि केहि वर्ष नेपालमा आरएनएसीमा काम गरे । उतिबेला स्कुले साथीहरुले उनलाई आरएनएसीमा देख्दा ए मरीचे ! भनेर बोलाएको रमाइलो प्रसंगको स्मरण गर्दछन उनी ।
मनिष ढकालको मस्तिष्क चलिरहन्छ हरदम । क्रिएटीभ सोचका धनी छन् उनी । समस्याहरुलाई चुनौतीको रुपमा लिएर जुधिरहन्छन । त्यसैले कहिले इंग्लिस इंस्टिच्युटको टीचर भए, कहिले इंग्लिश कोचिंग क्लास नै चलाए नेपालमा। अमेरिका आएर पनि सेल फोन एसोसरिजदेखि रेस्टुराँको मालिक बनेका छन् उनी । अझै नेपालमा उत्पादित मसलाहरूलाई अमेरिकामा ल्याएर व्यापार गर्ने ठुलै योजना बुन्दैछ यिनको दिमागले ।
नाम नै यूनिक लाग्यो तपाईँको रेष्टुराँको भनिरहँदा मुसुक्क हाँस्दै जवाफ दिन्छन मनिष - "मेरो पुर्खा गोरखाबाट आएको हुँदा यो नाम जुराएको हुँ । "
ममको मात्रै चालीस भेराईटी राखेको उनले बताए ।
गोरखा दरबारमा प्राय गोरा वर्णका ग्राहक बढी आउने रहेछन। नेपालीहरु कुनै कार्यक्रमहरु हुँदा मात्र हो नत्र फाटफुट मात्रै आउने रहेछन ।
गोरखा दरबार खुलेको धेरै भएको छैन । जम्मा डेढ़ वर्ष मात्र हो । तर यसको कमाईबाट उनलाई असन्तोष छैन । लन्चमा पनि स्पेशल अर्डर गर्न पाइने गोरखा दरबारको विशेषता हो । टू गो, होम डेलिभरीको पनि सुबिधा छ यहाँ । राम्रो सेवा र स्वादिलो खाना दियो भने रेष्टुराँ चल्छ भन्ने मान्यता राखेका छन् यिनले ।
नास्तामा चनाको स्वादिलो तरकारी पकाउने सेफ दिदी रीता नेपाल रिजालसँग पनि चिनजान भयो । नेपालमा नुवाकोट घर भएकी हँसिली दिदीको अनुहार यो स्तम्भ लेख्दा झलझली आइरह्यो आँखामा ।
आफ्नो हरेक सपनामा श्रीमती अंजना ढकालको ठूलो सहयोग रहिआएको सगर्व बताउँछन् मनिष । रेष्टुराँका भित्ताका नेपाली कला संस्कृतिलाई औल्याउदै उनले भने - "यो डिजाइनको अवधारणा मेरै श्रीमतिको हो ।"
अंजना ढकाल रेष्टुरांको काउन्टरमा बसेर सहयोग गरिरहेको पनि हामीले देखिरहेका थियौं ।
कतै पढेकी थिएँ - हरेक मानिस भित्र आफ्नै प्रकारको क्षमता हुन्छ । कसैले चिन्छ र पहिल्याउछ, कसैले चिन्छ मात्रै । कसैले चिन्नै सक्दैन ।
आफ्नो जिन्दगीको भोगाइले मनिषलाई निकै परिपक्व बनाएको छ । भन्छन - "म कुनै मान्छे स्लो र फास्ट छ भन्नेमा विश्वास गर्दिन । मानिसको मनको स्टाटसमा भर पर्ने कुरा हो । एउटा संकल्प लिएर अगाडि बढ्यो भने सब संभव छ ।"